Dzidza maitiro ekurodha pasi nekuisa mafomu pane yako Apple Watch | Ndinobva mac
Kwangosara mazuva mana chete eiyo Apple Watch buruka muSpain uye ndosaka tichida kupira chinyorwa pablog redu chinokuratidza matanho aunofanirwa kuteedzera kuti utore maapplication uye wozoaisa pawachi yako. Muchiitiko cheiyo iPhone kana iPad, isu tinayo chishandiso chinonzi App Store matinogona kutsvaga kunyorera nekumaisa kana mamwe matambudziko.
Nekudaro, iyo Apple Watch haishande nenzira imwechete uye unoda kuti iyo iPhone ikwanise kurodha pasi maapplication uye nekuaisa. Tinofanira kurodha pasi maApplication eWatch kuburikidza neapp yatinayo mairi yedu iPhone uye iyo yakauya kubva kuvhurwa kweIOS 8.3, iyo Apple Watch app. Ichi chishandiso ndipo patinofanirwa kupinda kubva panguva yatiri kuda kutanga kushandisa wachi yedu, nekuti iri mutariri wekuibatanidza ne iPhone yedu.
Inguva inguva yaunoziva kwazvo kuti maitiro ekurodha pasi mafomu uye nekuaisa pane ako Apple Watch ari. Ichi Chishanu chichava rimwe remazuva iwayo apo zviuru zvevashandisi zvichave nehungwaru wachi uye vatange kuishandisa. Kuti vaite izvi, vanofanirwa kuve vakajeka nezve nhanho dzavanofanira kutevedzera kuti vagadzire wachi dzavo nekukurumidza sezvazvinogona. Ngatitangei dzidzo iyi nekutsanangura zvaunofanira kuita kudhawunirodha zvinoshandiswa kubva kuApp Store.
1 Maitiro ekurodha pasi maapplication kubva kuApple Watch
2 Maitiro ekuisa maapplication paApple Watch
Maitiro ekurodha pasi maapplication kubva kuApple Watch
Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuvhura iko kunyorera Apple Watch pane yako iPhone.
Iye zvino unofanirwa kudzvanya pane chikamu "App Store".
Tsvaga iyo application yaunoda kubva kune anopfuura 6000 ayo atovepo. Ramba uchifunga kuti iwe unogona kutsvaga zvekushandisa nekudzvanya pa "Tsvaga" kana "Ongorora" kana "Zvinoratidzwa" kana tichida kutsvaga maapp.
Kuti utore kurodha iko kunyorera tinya "Tora" kana "Tenga" kana chabhadharwa.
Kana iko kunyorera kwadzoserwa kune yedu iPhone, isu tichafanirwa kuzviisa pane iyo Apple Watch. Parizvino, Apple'swatchwatch kunyorera kunoenderana nevamwe vavo veiyo iPhone, ndiko kuti, kana iwe ukakanda iyo Teregiramu yekushandisa yeApple Watch, iyo Teregiramu yekushandisa ye iPhone ichango dhawunirodwa nekuti ndiko kunoitwa basa rese uye Apple Watch app zvinongotarisira kuratidza mhedzisiro. Sezvo yematsutso panoburitswa watchOS 2 pachave paine zvekushandisa zvemo uye zvinhu zvichachinja.
Maitiro ekuisa maapplication paApple Watch
Vhura iyo Apple Watch app pane yako iPhone.
Dzvanya paboka "Wachi yangu".
Mune runyorwa rwezvishandiso zvatinowana isu tichafanirwa kutsvaga iyo yatiri kuda kuisa paApple Watch, tinya pairi uye tinya gadza.
Wobva washandisa sarudzo "Ratidza app paApple Watch".
Iko kunyorera kuchazongowirirana neyedu wachi uye izvo zvinoshandiswa zvinowoneka paApple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzidza maitiro ekurodha pasi nekumisikidza kunyorera pane yako Apple Watch
Carlos tsanangudzo akadaro
NEI PANE MAAPPS ANOGADZIRWA PAIOS, ANOONEKA MUAPPS STORE NDINOGONA KUADAUA PANE IPHONE, HAZVITI KUTI NDITORILE PAMUSORO PAAPLELE WATCH 4?
Pindura kuCARLOS TEVAL
Izvo Taylor Taylor Swift akataura nezve Apple Music kuita kuti Apple idzokere pasi